Namuhla sanquma ukubhala mayelana laptop Lenovo v580c. Ukubuyekezwa kuyoba enemininingwane, njengoba lokhu ephathekayo PC IdeaPad uchungechunge has a udumo omkhulu, kodwa ababaningi abantu abazi ukuthi yini kule divayisi edonsela abathengi. Imodeli iyashesha futhi has a lot of izimfanelo ezinhle, futhi ine engambi eqolo. Nokho, uma umphumela idivayisi ThinkPad, nayo ekhiqizwa yi-Lenovo, kungenzeka ukunquma ukuthi ezinye izici ahlupheke.
Lenovo imodeli v580c kuyinto ngempela efanelekayo esikhundleni ikhompyutha siqu, kodwa ukugqoka kule divayisi unaphakade naye zingavumi kakhulu. umzimba ukujiya kuyinto 35.7 mm lapho ivaliwe, futhi empeleni kuphela isithombe ibukeka ukukhanya kakhulu futhi ezacile. Esikhathini ukukhiqizwa lokhu notebook lalisetshenziswa plastic engasindi hhayi kuphela, kodwa futhi metal, ngakho idatha yangaphandle kwaleli washi elisha ingcono kakhulu imodeli ubudala.
Ububi kuyinto ikhava mncane okuyinto kuqeda ngisho isisindo encane, futhi uma ukuqhathanisa isiqalo okuhlanganyelwe ne-HP kudivayisi Umona 15 kungacacisa ukuthi izici V580c kakhulu bakhiphe elezinga eliphansi. Ngokuvamile, singasho nje ukuthi design zanamuhla, kodwa izinga Yakha ngandlela-thile azishintshile.
Kulesi devayse - Lenovo v580c - izici zinhle ngempela, futhi manje sizoxoxa ngokuningiliziwe mayelana nezixhumi kanye nezokuxhumana, abakhona kule divayisi. Kuye waphawula eziningi izinkulumo ezimbi eziphathelene emachwebeni, kodwa noma kunjalo udinga ukuba ne-laptop. Kukhona umfundi wememori khadi, okukhiphayo ezimbili yevidiyo, kanye amaningi USB ezisezingeni okusheshayo. Ukuze multimedia devaysa ukuthi kwanele. Ephathekayo PC adaptha ifakwe Centrino Wireless-N 2200 obhekene uxhumano olungenantambo, kuba WiFi ne-Bluetooth. Into ezithakazelisayo kakhulu ukuthi ukhona WiDi ukudluliswa okungenantambo vidiyo. Kukhona slot ekhethekile PCIe MiniCard, esesikhundleni usekelo mSATA. Uma kudingeka, sizokwazi ukufaka imodemu, inkampani noma i-USB drive.
Ungakhetha lokususa: Lenovo imishini v580c onesizotha futhi ayinikezi ngokuphelele akukho lezimanga kumthengi. Uthola laptop, adaptha nebhethri. Abaningi bayokuthi ufuna ukuba umnikazi we-isikhwama, kodwa, ngeshwa, akukho. Manje ake sibheke le kwidivaysi yokufakwayo ku Lenovo v580c. Ikhibhodi akuzange wathola lutho uma kuqhathaniswa ezazingaphambi kwayo. Ubukhulu we kwidivaysi yokufakwayo -. 34x11 cm Inzuzo kungenziwa ngokuthi ngokuthi umakhi wayo uye wasebenzisa sonke isikhala futhi efanele, ngathola esinye isakhiwo kanye nenombolo pad.
Phakathi amaphutha bungabonakala ukuthi ikhibhodi yama laptop iba hhayi ifakwe kwasemuva, kodwa manje ingatholakala cishe njalo idivayisi yesimanje. Iphedi senziwa izinga ngokuphawulekayo high ethuthukiselwa ukuqashelwa. Ubukhulu balo ezincane - 10.5x7 cm, futhi surface bushelelezi usebenzisa kahle uthinta izandla.
Ngokuvamile, Lenovo v580c akunakubangelwa uhlobo isabelomali, futhi kufanelekile kakhulu umfundi noma ehhovisi isisebenzi. Naphezu amanani aphansi, lokhu notebook kunezinzuzo zako, isibonelo, singakwazi ukusho sesikrini anti-ukukhanya futhi ikhibhodi ukhululekile, esixoxe kabanzi ngazo ngaphambili.
Iningi amakhompyutha notebook Lenovo sika akunakubangelwa umugqa yayo onobuhle Essential, kodwa namanje lula ukuthola futhi engabizi kwezinye chungechunge.
Ikhompyutha ephathekayo, okuyinto manje umbuzo, itholakala izinguqulo eziningana, futhi phakathi kwazo ukucushwa ezahlukene, ngakho uma unquma ukuthenga mthandazo oyisibonelo, lapho-ke sincoma ukuthi sinake yonke imininingwane kancane. Idivayisi ine ezimbili core processor Intel Core i3-3120M, okuyinto has a isivinini iwashi 2.5 GHz. RAM - 4 GB, nokho, imisebenzi elula, kanye nomsebenzi ukuthi kwanele. idrayivu kanzima 300 GB ngosayizi, zazo ngoba zonke labelwe 285,14 GB. Ezinye izindaba zika-inkumbulo anikiwe lokululama, kanye nezinye izixazululo.
Njengoba sishilo ngaphambili, le divayisi ifakwe isikrini anti-lembhali ukuthi LED ekhanyayo, futhi uthi idivaysi yakho ngeke efanelekile yokuphatha, ngisho noma isikrini uzothola elangeni.
Lokho bonke lezimanga. isihenqo Wide, futhi abushelelezi idayagonali 15.6 amasentimitha, nokuxazululwa kwezinxushunxushu ngendlela esiphezulu ukuthi kungenziwa isethwe, - 1366 × 768 Amaphikseli.
Lapho ekhetha Lenovo v580c Izibuyekezo abanye abasebenzisi ibalulekile. Ungakwazi nsí, njengoba manje lula ukuthola impendulo okuhle nokubi. Yiqiniso, uma choice esifanele kuyoba nzima, kodwa uma wenza ukuqhathanisa zonke pluses kanye minuses, bese unake intengo, uzokwazi ukubona ngokugcwele idivayisi iphinde ibone uma ngabe ungenayo i-laptop noma isidingo. By the way, Lenovo - inkampani ikhompyutha ne imisuka Chinese. Sha ibhalisiwe eSingapore. Kulokhu, it ikomkhulu Percheyze ukuthi esifundazweni US of New York. Amahhovisi main zitholakala e-Beijing futhi Raleigh (United States).
Lenovo G580: lwemininingwane yobuchwepheshe lokhu notebook
Indlela ukususa ikhibhodi kusuka laptop, lutho alilinyaziwe?
X102B (ASUS): ezibekiweko lobuchwepheshe
Ukuhlanza notebook kusuka uthuli ekhaya. Indlela ukuhlanza ezipholile, ikhibhodi laptop
Asus - Ishaja ye-Laptop: Indlela Yokukhetha
I-Laptop Sound Card
Isihlabathi Kinetic - kuyini? Ingabe-ke kungenziwa ekhaya?
Concept futhi izinhlobo ukuhlanganiswa kwezemfundo. Ukuhlanganisa kwezemfundo - kungcono ...
Phezulu iphupho nencazo: yini uyaphupha umama guys futhi yini okufanele uyilindele kulokho nombono onjalo?
Driver: San Francisco 2 - umdlalo othandwayo phakathi abalandeli yamahhashi enhle izimoto
Fontanelle wengane: ubukhulu, isikhathi lokuvala. Isakhiwo Yekhanda ngayo lapho usana
Kanjani ukwakha indawo incwajana. ulwazi olujwayelekile
Angelina Dobrorodnova: Biography of the abasha actress Russian
"Isikhungo sokuboleka": impendulo evela kumakhasimende nabasebenzi
Baby lwezimpawu. uphawu Amancane. Belek - namazinyane azo
Wedding Bolero - ukugqamisa izingubo likamakoti